Golaha guurtidu oo ah golaha ammaba aheyd hay’adda ugu sarreysa xeerarka dalka, waxaad mooddaa inuu sii luminayo maamuustkii, haybaddii iyo miisaankii uu lahaanjirey, duruufaha haysta darteed. Wuxuu golahani u baahanyahey inuu dib isu saxo. Sida Golaha Wakiillada wuxuu dhexgaley arrimo fulineed isla markaana ku guul darreystey, sida, muddo kordhin is daba joog ah, xaddidda doorashada iyo dacwado madani ah oo uu beel ka simey. Golaha guurtidu waa gole dhaqan oo distoori ah, ay tahey inuu ka shaqeeyo daminta khilaafaadka, nabadeynta beelaha, ilaalinta wadajirka ummadda, hase ahaatee qaabkii uu u maamuley qaddiyadda Ceelbardaale iyo natiijadii ka dhalatey, waa mid dhaawacdey haybaddii golaha khatarna u horseeddey jiritaankii qarankan haddaan si xikmad leh oo caddaalad ah xal looga gaadhin. Axsaabta qaranku waxey astaan u yihiin nidaam xaddaari ah oo looga gudbey qaabkii beelaha ku saleysnaa. Marka si hufan loo adeegsado waa nidaamka ugu habboon ee ummaddu ku soo saarto hoggaanka dalkeeda. Waana hawlbawlaha ummad kasta oo isbeddel doon ahi ka hinqan karto. Taasi waajibaad weyn ayey saareysaa masuuliyiinta asxaabta qaranka iney ummaddan oomman ee qarankan cusub tusaan quwaddeeda iyo kartideeda iyo himiladeedu halkey ku jirto oo ay u xulaan heerkasta oo ay ahaataba dadkeeda hoggaamin kara ee horumar gaadhsiin kara. Kuwaas oo ay lagama maarmaan tahey iney ku sifoobaan hufnaan, daacad, karti, aqoon iyo dhabar adeyg ay xilliyadan adag ummaddan ku sabata bixin karaan. Laakiin waa nasiib darro weyn, haddii ay siyaasadda ka raadiyaan meel xaqiran; caadifada dhalanteed ah, mareegta qabiilka ammaba kala saari waayaan ilaalinta qaranka iyo qaladaad cid gaar ahi fashey oo haddii xilkasnimo lala yimaaddo xilligeeda la sixi karo. Baratanaka siyaasadda haddii uu ka hor yimaaddo si toos ah ammaba si dadban, nabadda, sumcadda, wadajirka iyo jiritaanka qaranimo waa ruux geedkuu korayo ammaba saaran yahey guntiisa jaraaya. Maansadan gaaban waxey ishaareysaa jaanib ka mida muuqaallada guud ee golayaasha iyo axsaabta dalku yeelan karaan ammaba wajiyada moronka badan ee ay qaateen waayadan danbe. Garashada ay maansadu u yeedheysaa waxey u taagan tahey xikmadda iyo caqliga toosan taas oo ruux walliba nasiibkiisa leeyahey, loona baahan yahey inuu gaarkiis isu gar naqo. Garashadu waxey u taagan tahey waxgaradka ummadda sida inta maskax fayow, gole kasta oo ay ku jiraan gaar ahaanna culimada, aqoonyahanka, ururrada bulshada dhallinyarada, salaaddiinta, haweenka etc.Waxeyna fareysaa iney u guntadaan xallinta hawlahani murugsan, jidna u bixiyaan ummaddu ku higsato himiladeeda iyo aayaheeda. Waxeyna fogeyneysaa dhaqanka guuldarrada ee ma aha mid ashkhaas ku wajahan. Waxeyna fogeyneysaa dhaqanka guuldarrada ee ma aha mid ashkhaas ku wajahan. Wixii halqabsi ah amma dhalliil kasoo baxa looma qasdiyin ee hallaga raalli ahaado.
Waxaan isu kay galayn Gedduu arrinkaa ku hanan
Hoostiisuu garaacayaa Guntiyo jirriddaba ku jari
Qudhiisa galaafan karo Miyuu shaki soo galaa
Kuwii geediga horkacay Reerkoon gaadiid laheyn
Duqey guurtiya laheyn Xeer iyo gogol bilan laheyn
Gegay kaga soo hadheen Darbaa golayaashii degey Dumaal iyo garab ku yimid
Waxey kala gocanayaan Salkeeda ma gaadhi karo
Gurxan iyo qaylo dhaan Galaayuus aan dameyn Iyagaa isu gaydhanoo
Tabcey isla gaadayaan Khiyaamiyo guul darrey
Ku giiji halhays ah bay Intaa isu gooddiyaan
Kuwani ka dul goohayiyo Gadaal kuwa imanayaba
Khayrkiisay guran karaan Haddii badh giriifayiyo
Adoo Guullaha cuskani Garsoor hufan baan rabaa
Xikmadi godlataan rabaa Mar uun bal garwaaqsadaan
Adoo Guullaha cuskani Taariikh aan laga gafeyn
Garaad togan baan rabaa Gaddii lagu rayn lahaa
This entry was posted on August 19, 2009 at 10:31 pm	and is filed under Articals.
Tagged: Articals, Somaliland. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.